किन संगठन बाहिरै रहे ३० हजार इञ्जिनियर ? « Janata Samachar
किन संगठन बाहिरै रहे ३० हजार इञ्जिनियर ?
प्रकाशित मिति :5December, 2018 9:33 am
काठमाडौं । नेपाल इञ्जिनियर्स एसोसियसन (नेइए)को निर्वाचनमा देशभरका इञ्जिनियर होमिएका छन् । प्रजातान्त्रिक खेमाले नेतृत्व गर्दै आएको नेइएमा यसपटक प्रोग्रेसिभ इञ्जिनियरिङ एसोसियसन (पिन)ले आफ्ना विधि एजेण्डासहित नेतृत्वको दाबी गरेको छ । प्यानलगत प्रतिस्पर्धामा पिनका इञ्जिनियरहरु प्रचार अभियानमा जुटेका छन् । मंसिर २८ गते हुने निर्वाचनलाई लक्ष्यित गर्दै चुनावी प्रचार तीव्र पारिएको छ ।
पिनका तर्फबाट नेइएमा उपमहासचिवका उम्मेदवार इञ्जिनियर कपिल आचार्य यसपटक पिन पक्षलाई किन भोट दिने भन्नेमा यसरी तर्क गर्नुहुन्छः
नेइएको सुधार होइन परिवर्तन
४७ हजार इञ्जिनियर छन् । नेइएमा २८ हजार सदस्य थिए । अहिले घटेर १७ हजारमा झरेको छ । संस्थाप्रति झुकाव किन घट्यो ? नेतृत्व असफल भएर । एउटा नागरिक संस्था, त्यो पनि प्राविधिकहरु, जो यो देशका लागि जरुरी छन् । नेइएले कहिले पनि बोलेको सुनिएन । देश पुनर्निर्मा(ण चरणमा छ । इञ्जिनियरहरुकै जरुरी छ । तर नेइए बोल्दैन् । अरु बसै तह र वर्गले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको कुरा गर्छन् । तर प्राविधिक फाँटको इञ्जिनियरहरुको संस्था कतै चुइँक्क बोल्दैन । त्यसैले हामी भन्छौँ, नेइए सुधार होइन परिवर्तनकै संघारमा छ, त्यसका लागि हामी नेतृत्व दिन तयार छौँ ।
प्रादेशिक चुनावको अभ्यास
नेइएले पहिलोपटक प्रादेशिक निर्वाचनमा गएको छ । विधान संशोधनपछि प्रादेशिक चुनावको अभ्यास भएको हो । विधान संशोधन गर्ने प्रयास पनि प्रोग्रेसिभ समूहको हो । पहिले नै संघीय संरचनामा जाउँ भन्दा मानिएको थिएन । अहिले देश संघीयतामा गएपछि प्रदेश संरचना बन्ने छ । यसका लागि पनि पिनले नै पहल गरेको हो ।
प्रदेशमा १५ सदस्यीय समिति, एक जना प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था छ भने केन्द्रमा १८ प्रदेश सहित २५ जोडेर १३० नेइए प्रतिनिधिका लागि चुनाव हुँदैछ । पहिले देशभर १५ जनाका लागि मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो भने अहिले १३० जनाका लागि निर्वाचन हुन्छ । सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारामा इञ्जिनियरहरु पनि सारथि हुन् । यो विषय अब हामी स्थापित गर्न लागेका छौँ । विकास निमार्णको काममा जोडिएका इञ्जिनियरको भूमिकाबारे संस्थाले नबोल्दा इञ्जिनियरिङ पेसाको तू भूमिकै छैन जस्तो देखिएको थियो ।
के हो पिनको एजेण्डा ?
इञ्जिनियरिङ पेसा आफैँमा चुनौति हो । इञ्जिनियरहरु कामका सिलसिलामा दुर्घटनामा पर्न सक्छन् । परेका छन् । यस्तो बेला पीडितले आफ्नो हकहितको काम गर्ने संस्था खोज्ने हो । तर कहिल्यै पनि नेइए पीडितको संस्था बन्न सकेन । सायद यसैले हुनुपर्छ, संस्थाका सदस्यहरुको संख्या घटेको, विकर्षण बढेको । त्यसैले हामीले इञ्जिनियरको सामुहिक विमा कार्यक्रम ल्याएका छौँ । संस्थाबाहिर रहेका ६४ प्रतिशत पक्कै हाम्रो एजेण्डामा आकर्षित बन्नुहुनेछ । त्यति मात्र होइन, कुनै आयोजनाको स्टिमेट फाइनल स्वीकृत गर्ने काम त इञ्जिनियरको हो । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका हिसाबले कार्यालय प्रमुखले गर्ने भएकाले यो नेपाल इञ्जिनियरिङ ऐन विपरित छ । यो पनि हाम्रो एजेण्डा हो । सबै आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलन पनि गर्छन् । तर हामी इञ्जिनियर काम मात्र गर्छौँ, चर्चा हुँदैन । हाम्रा अधिकारका विषयमा संस्था बोल्नै छाड्यो । इञ्जिनियरको हकहितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।
थप चुनावी एजेण्डा
युवा इञ्जिनियरको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने एजेण्डा हो अब । इञ्जियिरिङ आफैँ रोजगारी सिर्जना गर्ने पक्ष पनि हो । सामान्यतयाः ब्याचलर व्यक्ति सात लाख रुपैँया सरकारबाट ऋण पाउँछ । इञ्जिनियरले व्यवसाय गर्छु भन्दा त्यो भन्दा बढी सुविधा किन नपाउने ? के इञ्जिनियरले ५० लाख वा २५ लाख पाउन सक्दैन ? सायद संस्थाले बोलेको भए यतिखेर पाइसक्थ्यौँ कि ? स्टाफ कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना हाम्रो अर्को एजेण्डा हो । २९ औँ कार्यकारिणी चुनावमा स्टाफ कलेजको विषय उठेको थियो । अब स्टाफ कलेज एण्ड रिसर्च सेण्टरको विषय उठाएका छौँ ।
र, नेइएले आफैँले स्टाफ कलेज चलाउने भनेका होइनौँ । राज्यले सञ्चालन गर्ने हो । जावलाखेलमा रहेको प्रशासनिक प्रतिष्ठान त राज्यले सञ्चालन गरिरहेको छ । हामीले के दावा गरेका छौं भने आउँदो बजेटमा हामी स्टाफ कलेजका बजेट छुट्ट्याउने व्यवस्था हुने वातावरण बनाउँछौँ ।
यस्तै, इञ्जिनियर्स हाइड्रो अर्को एजेण्डा हो । ४० हजार इञ्जिनियरहरुले सरदर दुई लाख मात्रै जम्मा गर्यौं भने करिब ८ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ । अरु ऋण ब्यवस्था गर्न सक्छौँ । हाम्रो पक्षबाट महासचिवका उम्मेदवार छविराज पोखरेल नै जलविद्युत लगानी कम्पनीका सिइओ हुनुहन्छ । अध्यक्षको उम्मेदवार त्रिरत्न बज्राचार्य हाइड्रोपावर विज्ञ हुनुहुन्छ । म पनि हाइड्रोपावरमै संलग्न छु । सेना, पुलिसले स्कुलहरु चलाइरहेको छ । पेट्रोलपम्प चलाइरहेको छ । हामी पनि किन यस्तो नगर्ने ? इञ्जिनियर्स हस्पिटल किन नचलाउने ?
स्थापना दिवसमा सीमित संस्था
नेइएको स्थापना दिन एउटा कार्यक्रम हुन्छ । केही अनुदान दिन सक्ने बोलाइन्छ । बेलुका पार्टी हुन्छ । दुई हजार इञ्जिनियर उपस्थित हुँदैनन् । संस्थाप्रति विकर्षण बढ्दो छ । चुनाव जित्यौँ भने पहिलो बैठकबाटै सामुहिक बिमाको निर्णय हुनेछ । श्रम ऐनले तोके बमोजिम इञ्जिनियरहरुको तलब–सुबिधाका विषयमा राज्यसँग पहल गर्छौं । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो पहल हो । युवा पुस्तामा जागिरे होइन, उद्यमी मानसिकता जरुरी छ । अबको दशक पूर्वाधार दशकको रुपमा घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिन्छौं ।
एउटा मात्रै मेघा प्रोजेक्ट नेपाल आयो भने अहिलेको जनशक्तिले पुग्दैन भन्ने हाम्रो अनुमान छ । चुनावी रफ्तारमा हामी देशब्यापी कार्यक्रम गरेर काठमाडौं फर्किसकेका छौँ । धेरै साथीहरुले चासो राख्नुभएको छ र कुनै पनि हालतमा नेइएलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, सुधार होइन भन्ने मुद्दा उठाएका छौँ ।
समाज कल्याण परिषद्मा भ्रष्टाचार, दुई मन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले दुई मन्त्रीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । भ्रष्टाचार
फेरि घट्यो पेट्रोल–डिजेलको मूल्य
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको मूल्य घटाएको छ । मंगलबार रातिबाट
घट्यो इन्धनको भाउ
शेयर कारोबार दोहोरो अंकले घट्यो
काठमाडौं । आइतबार र सोमबार उकालो लागेको शेयर कारोबार मंगलबार भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ ।
२०७५ पुस ४ गते जनता टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम तालिका बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी/राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ…
कञ्चनपुर । भीमदत्तनगरपालिका उल्टाखाममा हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा आठ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध सार्वजनिक कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ…
एक महिनासम्म बैठक बसाउन सकेनन् राजेन्द्र…
शिव अधिकारी यदुवंशी काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपालको अध्यक्ष मण्डलको सदस्यबाट संयोजक बनेका राजेन्द्र महतोले एक महिनासम्म पार्टीको बैठक…
कुकुरले छोराको लिंग खाइदिएपछि अभिभावक चिन्तित
काठमाडौं । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–६ चापटोलकी सुजाता चेपाङको मन छियाछिया भएको छ । आँगनमा छोरा राखेर पानी भर्न जाँदा उनको…
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पूर्णता
काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पूर्णता दिएको छ । प्राज्ञ परिषद् कुलपतिः गंगाप्रसाद उप्रेती उपकुलपतिः डा.जगमान गुरुङ सदस्य सचिवः…
अपिकाे सिरेटाेमा अागाेकाे सहारा (फोटोफिचर)
लोकेन्द्रप्रसाद जोशी दार्चुला । अपी हिमाल, व्यास गाउँपालिकालगायत उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यति बेला चिसो बढेको छ । त्यहाँको…
कांग्रेस महासमितिमा कुटाकुट, बैठक स्थगित
सवारी दुर्घटनामा ७४ जनाको मृत्यु
फेरि बढ्यो पेट्रोल–डिजेलको मूल्य
‘जेठीआमाले पकाएको चाउमिन खाँदा दुई छाेराको मृत्यु’
मेलम्चीका ठेकेदार पक्राउ, सिएमसी टाट पल्टियो
गृहकार्य नगरेको कारबाही ‘खुट्टा भाँच’